Puntland oo ka soo horjeesatay Guddiga Saxaafadda ee Golaha Wasiirada ansixiyeen – STAR FM SOMALIA
Puntland oo ka soo horjeesatay Guddiga Saxaafadda ee Golaha Wasiirada ansixiyeen
Maamul Goboledka Somaliyed ee Puntland ayaa ka soo horjeestay Guddiga Saxaafadda oo Khamiista la soo dhaafay ay meel mariyeen Golaha Wasiirada Somaliya.
Guddigan oo ka kooban Sagaal xubnood, ayaa Golaha Wasiirada Somaliya waxaa horgeeyay Wasiirka Warfaafinta Somaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, iyadoo Xubnaha Golaha Wasiirada ay meel mariyeen.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soocadde, ayaa sheegay in Puntland ahaan guddigaasi ay ka soo horjeedaan.
Sababta ay uga soo horjeedaan, ayaa wuxuu ku sheegay inay tahay shaqsi aanan matalin Puntland in la geliyay xubinimadii Puntland Guddigaasi ay ku laheyd.
“Gabi ahaanba waan qaadacnay Guddigaasi, sababtoo ah qofbaan qoranay inaga xubintayadii dabadeedna waxaa dhacday qofkii aan qoranay qof aanan aheyn ayaa la geliyay Booskii, qof aanan matalin Puntland, sidaasi awgeed waan ka soo horjeednaa Guddigaasi.” Ayuu yiri Soocadde oo Saxaafadda la hadlay.
Puntland ayaa inta badan looga bartay inay ka soo horjeestaan Guddiyada kala duwan ee Dowladda dhexe ay ku dhawaaqdo, iyadoo Puntland qiil u yeelaysa guddi kasta oo Dowladda dhexe ay shaaciso.
Xubnaha Guddiga Saxaafadda ayaa ka kooban 9 xubnood, kuwaasi oo matalaad ku leh Maamul Goboledyada dalka ku jira iyo Ururada Bulshada Rayidka.
Prof. Jawaari oo ku dhawaaqay in Shirka madasha Wada tashiga uu dib u dhac ku yimid
Puntland oo dil toogasho ku xukuntay 43-ruux ka mid ahaa Maxaabiistii Al-Shabaab